'Auggie' nwere ike ịbụ otu n'ime aha nickname kachasị mma, mana onye Ọzụzụ Atụrụ nke Australia bụ n'ezie onye nwe ya. Gụọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkịta mara mma ma na-arụsi ọrụ ike!
Australian Shepherd German Shepherd mix: Nkịta kacha mma?
Ọ bụrụ na ị nọ na-achụ nta nke kachasi nkịta na-azụ atụrụ nke na-arụsi ọrụ ike ma nwee ike ịme ihe ọ bụla? Lee anya ọzọ karịa onye Ọzụzụ Atụrụ Australia nke Ọzụzụ Atụrụ German!
Nke a bụ ngwakọta nke nkịta abụọ na-arụ ọrụ - otu bụ onye na-azụ anụ, ebe nke ọzọ bụ igwe na-adọkpụ sled. Izute energetic Australian Shepherd Husky mix!
Aussiedor: Ndi Australian Shepherd Lab Lab mix diri gi?
Na-eche maka ịzụ a na-arụ ọrụ nkịta prodigy? Gụọ akwụkwọ anyị zuru ezu na ngwakọta ụlọ Ọzụzụ Atụrụ nke Australia ka ị chọpụta ma ọ bụ nke a bụ nkịta kwesịrị gị!
Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia - Ihe to Ga-atụ Anya na Nzube Nkịta a
Ndị ọzụzụ atụrụ Ọstrelia bụ ụdị na-eme ọtụtụ ihe. Ọ bụghị naanị na ha bụ ndị nkịta na-arụ ọrụ ike, mana ha nwekwara ọgụgụ isi na ezigbo ndị enyi ezinụlọ.
Australian Terrier: Ihe You Kwesịrị Knowmara Banyere ụdị nkịta a
Obere ọdụ ụgbọ mmiri nke Australia bụ ọdụm nwere mmụọ obi, mmụọ mmụọ, ma mara ihe, nke mbụ zụrụ iji chịa òké na agwọ.
Ozi Ntanetị Nkịta Basenji
The Basenji bụ dinta ma ọ bụ ma a kpochapụwo n'anya ma ọ bụ senti hound. Basenji, otu hound nke etiti Afrika, bu otu n'ime udiri ihe ochie kacha ochie. Nkịta nke ụdị Basenji dị na nka Ijipt oge ochie. Akụkọ ihe mere eme nke oge a nke ụdị a bidoro na narị afọ nke iri abụọ mgbe ... Gụkwuo
Lovehụnanya-obere ịhụnanya: ị nụtụla banyere Basset Hound na-eguzosi ike n'ihe?
You nwetụla mgbe ị chọrọ nkịta na-arụ ọrụ ma ọ bụ nkịta nwere ọrụ dị ala? Na anya ha na-ada n'anya na ntị ogologo, Basset Hounds kwesịrị ịdị na ndepụta gị!
36 Basset Hound Mixes to Fall in Love with Ugbu a
Basset Hounds bụ ihe pụrụ iche pụrụ iche, mana nsụgharị purebred nwere ike ọ gaghị abụ kpọmkwem ihe ị na-achọ. Ihe ngwọta - ndepụta nke Basset Hound mixes.
Kedu ihe bụ nkịta Beabull, ị kwesịrị inweta otu?
Love hụrụ nkịta ndị mmebe n'anya? Chọrọ pal furry nke mara mma, na-egwuri egwu, na ezigbo ezinụlọ ahụ? Mgbe ahụ, lee anya na mgbakwunye Beagle Boxer AKA Beabull.
Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ezigbo Beagle, site na otu kachasị mma iji lekọta nwa bekee a na-egwu egwu na ihe ị nwere ike ịtụ anya maka nsogbu ahụike.
Ngwunye Beagle Basset Hound dị mma ọ bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Na-achọ enyi ịchụ nta? Ngwakọta Beagle Basset Hound (AKA Bagle Hound) nwere ike ịbụ nnukwu isi anụ! Chọpụta ihe banyere obe a ebe a.
Ngwakọta nke Beagle Lab bụ smart crossbreed nke na-achọkarị ịchọpụta gburugburu ya. Chọpụta ma nkịta a na-egwuri egwu bụ egwuregwu dị mma maka ezinụlọ gị.
The Beaglier bụ gbasiri ike ma na-eguzosi ike n'ihe n'etiti Beagle na Cavalier King Charles Spaniel. Njikere ichoputa ihe ndi ozo banyere pooch?
Collie Bearded - Ihe ichere anya na nkịta nkịta a
Onye Bearded Collie, nke a na-akpọ ịhụnanya Beardie, ka e mepụtara na Scotland dị ka nkịta na-azụ anụ. O nwere ike ịbụ na ndị nna nna ya gụnyere nkịta na-azụ anụ sitere na kọntinenti Europe, dịka Poland Lowland Sheepdog (Polski Owzcarek Nizinny) na Komondor, jikọtara ya na nkịta na-azụ atụrụ nke British Isles. E mepụtara ya dịka onye ọrụ kwụụrụ onwe ya, nwee ike ... Gụkwuo
Kedu ihe ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị gwakọtara nkịta abụọ na - arụ ọrụ na nkịta gburugburu ụwa? Zute nkịta mmebe, onye Belgium Onye Ọzụzụ Atụrụ German. Gụọ Ebe a!
Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Bernedoodle
Poofy na goofy, Bernese Mountain Dog Poodle Mix ma ọ bụ Bernedoodle bụ ngwakọ nke dịkwa nwayọ na ọgụgụ isi. Mara ihe banyere ha ebe a!
Nkịta Ugwu Bernese - Ihe ichere maka nkịta nkịta a
Aha Bernese Mountain Dog bụ nsụgharị ọjọọ nke German 'Berner Sennenhund,' nke pụtara n'ụzọ nkịtị Bernese Alpine Herdsman's Dog. Dị aha mbụ ahụ bụ Durrbachler, mgbe a na-ere ụlọ ndị ọbịa ebe a na-azụ ma na-ere nkịta ndị a. Emepụtara ụdị nke oge a site na nkịta ndị a hụrụ n'ime ime obodo gburugburu Bern, Switzerland na ọ bụ naanị ... G moreKWUO
Ntuziaka gị na nkịta kachasị mma maka ndị na-enweta ọla edo
Inwe nsogbu ikpebi nri na akara ị ga-enye Goldie gị? Isiokwu a ga - abụ ihe kachasị enyere gị aka ịmara nri nkịta kacha mma maka ndị na - agbapụta ọla edo.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nri anyị kachasị elu nke nkịta nkịta dị nro na afọ nwa nkịta gị nke na-ezute nkịta na-eto eto na-edozi ahụ.
shih tzu poodle mix zuru oke
cavalier eze charles spaniel toy poodle mix
ebe ịzụta waya haach dachshund
aha nkịta nwanyị German na -azụ atụrụ
kedu ihe cavachon na -agwakọta